musha More NASCAR Vatyairi Bio Kevin Harvick Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Kevin Harvick Biography inokuudza Chokwadi nezveNhau yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki - Mike Harvick (Baba), Jonell Harvick (Amai) uye Mukadzi (Delana Harvick), nezvimwe.
Zvikuru, Hupenyu hwemumhanyi, Vanun'una (Amber naClayton Harvick), Mararamiro uye Networth.
Mumashoko mashoma, tinopa nhoroondo yakazara yeHupenyu yeAmerican motorsports racer. Matambudziko Kevin Harvick nemhuri yake aifanira kupfuura nemauri kuti ave mutyairi wemujaho weNascar.
Kuti ukwidzire chishuwo chako cheBiography, heano ma gallery nzira dzezviitiko muhupenyu hwaKevin Harvick. Muchidimbu, mafoto ari pazasi anopfupisa Hupenyu hwepakutanga uye Kusimuka kwemujaho wemotokari.
Kevin Harvick's Biography - Tarisa Hupenyu Hwake Hwepakutanga uye Nyaya Yekubudirira.
Isu tinoziva mutambi nekuda kwehunyanzvi hwake munjanji uye anorumbidza zita rake. Asi, vashoma vanofarira mitambo yemotokari vanoziva Kevin Harvick's Biography. Saka, tinopa memoir yese kwauri. Pasina kutambisa nguva, ngatitangei.
Kevin Harvick Childhood Nyaya:
Mufananidzo usingawanzoitiki waKevin Harvick achiri Mwana Akazadzwa Nemufaro Wakawanda.
Kune vanotanga biography, mujaho wemotokari ane mazita ekuti 'Happy Harvick' uye 'Iye ari pedyo'. Kevin Harvick akaberekwa musi we 8th waDecember, 1975, kuna baba vake, Mike Harvick naamai Jonell Harvick.
Our American sports profile mwana wechipiri wemhuri. Ndiine mukoma mukuru anonzi Clayton Harvick uye hanzvadzi yechidiki, Amber Harvick.
Kevin akakurira muguta reCalifornia, United States of America. Kubva pakuzvarwa, agara ari mwana wemitambo anofarira mujaho kunyanya.
Zvakare, mwana mudiki aive fan wemujaho wemitambo akasiya basa Rick Mears uye mutyairi wemotokari yeIndy.
Kuda mujaho uku hakuna kushamisa nekuti baba vaKevin Harvick vaive mujaho wemotokari, uye mwanakomana wavo akazova mumwewo.
Mike Harvick akawana Kevin mudiki go-kart sechipo paakanga aine makore mashanu, ayo aaishandisa kudzidza kutyaira.
Kevin Harvick Mhuri Background:
Baba vaKevin Harvick vakamboshanda semukuru wechikwata chechikwata chemujaho. Pakupedzisira, akawana chokurarama nacho nebasa rake somudzimi wemoto. Apo amai vake, Jonell Harvick, vakanga vari muchengeti wemba.
Muhoro waMark Harvick semudzimi wemoto wakanga usina kukwana kutarisira imba uye mujaho wemwanakomana wake. Saka mune zvimwe kuderedza mari, akatora basa renguva isina kuzara samakanika kuvaka mota dzaKevin Harvick.
Nyaya refu ipfupi, mhuri yaKevin Harvick yakanga isina kugadzikana mune zvemari. Vakaita imwe nhanho mukutengesa zvinhu zvinokosha zvomumba kuti chishuvo chemwanakomana wavo chizadzike.
Kevin Harvick Mhuri Mavambo:
Kevin Harvick muAmerica neNyika. 'The Closer' akaberekerwa mutaundi rinonzi Bakersfield. Uyezve, vabereki vake, Mike naJonell Harvick ndeveAmerica, vane dzinza ravo risingazivikanwi.
Iyo suburb Bakersfield inozivikanwa nemimhanzi yenyika, iyo 'Bakersfield's Sound'. Vatambi vemimhanzi vane mukurumbira vanobva kumusha kwaKevin Harvick ndiLate Buck Owens naMerle Haggard.
Mukupedzisa, Kevin Harvick muAmerica. Inotevera ndiyo graphic kuratidzwa kwemidzi yemhuri yake pamufananidzo pazasi.
Iyo Ancestry Origin yaKevin Harvick.
Kevin Harvick Dzidzo:
Kutanga, Kevin aive nedzidzo yake yepamutemo muNorth High School, Bakersfield. Munguva yezvikamu zvedzidzo, Harvick akanga achiri kumhanya-nguva muNascar Southwest Series.
Kevin Harvick's Alma Mater, North High School, Bakersfield, California.
Kevin Harvick paakanga asiri mujaho, akapinda muchikwata cheNorth High Wrestling. Mudzidzi wacho akatokodzera kuti atore huremu hwechikamu chepakati. Zvinofadza kuti Mike naJonell Harvick vakapa nzvimbo yekuti mwanakomana wavo aongorore zvaanogona.
Kevin Harvick Biography - Motokari Race Nyaya kubva paMazuva Ekutanga:
Baba vaHarvick vaive murairidzi wavo wekutanga uye mudzidzisi pabasa rake rekutanga remujaho.
Mashoko aMike Harvick kumwanakomana wake aive ekusundidzira chero nzira yaidiwa kuti akunde mujaho wemota. Somugumisiro weiyi nzira, Harvick muduku akanga ane utsinye uye ane chisimba zvikuru pamavhiri.
Nechikonzero ichi, nezvaakadzidziswa nababa vake achiri mudiki, Kevin Harvick aive nemibairo yakati wandei.
Ndeapi manomwe National go-ngoro uye maviri International mibairo, pakati pevamwe. Pazasi pane mukomana wechidiki arikumisikidza aine mikombe yake yakasiyana.
Anofara Harvick Nemibayiro Yake Yakawanda Pakutanga Kwebasa Rake Remujaho.
Kevin's Nascar Basa:
Muna 1995, apedza chikoro chesekondari, Kevin Harvick akabatana neNascar Featherlite Series. Akaita nhangemutange yake yekutanga nekuhwina ndokupedza chinzvimbo chechi11. Saka, chiitiko ichi chakamupa mubairo weRokie weGore.
The Rookie of the Year Awards Yakapiwa kuna Kevin Harvick.
Makore matatu gare gare, mujaho wekumhanya-mhanya akava nhengo yemapfumo motorsports.
Uye Kevin Harvick akabatana neCraftsman Camping Series uye World West series. Mujaho uyu akapedza mwaka iwoyo ari muhwina mukuru wechikamu ichocho.
Iye 1998 NASCAR Division Champion Winner, Kevin Harvick.
Muchidimbu, kumufaro wemhuri yaKevin Harvick, ave mutsva hotshot paNascar Track Series. Mujaho wenhare awana mukurumbira wekuve mutyairi wemujaho wakaoma.
Kevin Harvick Biography - Rwendo rweKukurumbira Nyaya:
Muna Chikunguru 2008, Harvick akahwina iyo $37000 pamakumi matatu neshanu pagore 35 TD Bank muOxford, Maine. Akave wekutanga NASCAR sprint driver kuhwina mazana maviri nemakumi mashanu kunze kweGlen Luce naJoey Jr.
Kevin akakundawo mujaho wake wekutanga weDaytona 500, achirova Mark Martin ne 0.20 seconds, muganhu wepedyo kubva 1993. Mukuwedzera, akazova mutyairi weNascar we6 kuti akunde zvose Daytona 500 uye Brickyard 400 mushure meJeff Gordon.
Iyo Multiple Daytona 500 uye Brickyard 400 Winner Kevin Harvick Achiratidza Trophies dzake.
Pakazosvika 2020, Kevin Harvick akange awana rekodhi yemahwina makumi mashanu, achipfuura muridzi wemota yake, Tony Stewart.
Zvakamuisawo semutyairi wechigumi nembiri munhoroondo yeMukombe. Kevin Harvick ndiye ega 2nd mutyairi kubva 1978 kutungamira nhevedzano mumapoka ese.
Ari kuita Nhoroondo ne50th NASCAR Cup Series.
Mukupedzisa, iye zvino nyanzvi yemutyairi wemujaho yave simba rinotyisa pamavhiri. Panguva yekunyora Kevin Harvick's Biography, ndiye mumwe wevatyairi vemitambo mikuru yemotokari mumujaho weNASCAR. Zvimwe zvacho, vanoti inhoroondo.
Kevin Harvick Akaroora here? -Kubvunza nezve Mukadzi wake, Vana
Norudo, unyanzvi hwomujaho uyu uye unyanzvi hunogona kuramba husina maturo, sezvo kuri kunzwa kwomwoyo.
Zvechokwadi, zvinova zvakanaka kana vanhu vaviri vachidanana uye vachidanana. Kuna Kevin Harvick, imwe hafu yake ndiDelana Lynn Linville.
Sangana naDelana Lynn Harvick, iyo Glamorous Wag yaKevin Harvick.
Mudzimai waKevin Harvick, Delana, akaberekwa musi we 7th waJuly 1973. Kuna baba vake, mutyairi weBusch akarega basa John Paul Linville uye amai, Joyce Linville.
DeLana Harvick chizvarwa chekuKernersville, North Carolina, akakurira achitenderedza njanji.
Sei Kevin naDelana Vakasangana:
Vaviri vakanaka vakasangana panguva yemujaho kuMichigan Speedway muna 2001.
Panguva iyoyo, DeLana Harvick aishanda sePublicist yaRandy Lajoie naJeff Gordon. Pasina kunonoka, munaFebruary, Kevin Harvick akaroora Delana muNevada, Las Vegas.
Kaviri Anobata Mubairo Kevin Harvick naDelana Lyn Harvick paMuchato wavo muLas Vegas.
Uye kubvira makore 20 pashure pomuchato wavo, vanga vakanamatirana. DeLana Harvick ndomumwe wevanonyanya kutsigira Nascar Wives, uyo anogara ari munzira nemurume wake, Kevin Harvick.
Vana vaKevin Harvick:
Uyu Nascar Couple akakomborerwa nevana 2 kubva muwanano yavo: Keelan Paul Harvick naPiper Harvick.
Nezve Keelan Paul:
Mwana wekutanga waKevin Harvick akaberekwa musi we8th waChikunguru, 2012, muNorth Carolina. Keelan Paul ari kutevera tsoka dzababa vake munjanji. Pazera remakore mapfumbamwe, mwana ane mikombe muzita rake yekutamba kunodadisa mumitambo yemotokari.
Baba Vanozvikudza Kevin Nemwanakomana wavo, Keelan Paul Harvick Mushure mekukunda Kwemujaho.
Nezve Piper Harvick:
Miss Piper Grace ndiye mwana wechipiri waKevin naDelana, uye akaberekwa musi we 28th waDecember 2017. Musikana wechidiki ari kugadzirirawo kujoina makwara sababa vake.
Sangana naMiss Piper Nyasha, Mwanasikana waKevin Harvick.
Kevin Harvick Hupenyu Hwega:
Ko 'Happy Harvick' anoitei kana asiri paNascar neBusch series? Zvakanaka, Kevin Harvick anoita mamwe mabasa, ayo atinozotaura pamusoro apa.
Kevin Harvick's Hobby:
Kungofanana neNASCAR shasha Denny hamlin, Kevin Harvick anotamba gorofu nemwanakomana wake, Keelan Paul.
Chokwadi, inguva yakakwana yekuti muhwina weDouble Daytona 500 abatane nemukomana wake mudiki. Tevere mumufananidzo ndibaba vakanaka nemwanakomana vari panhandare yegorofu.
Keelan Paul Harvick NaBaba vake Kevin Harvick Kunakidzwa Nekuita Gorofu.
Muchidimbu, Kevin Harvick anofarira kupedza nguva nemhuri yake. Mike Harvick (Keelan naPiper muzukuru) vakasiya tsoka yekuti akwidze imba yake. Ichi chiitiko chimwe chete chake chinoisa Kevin pakati pevabereki vane mutoro nhasi.
Kevin Harvick Mararamiro Chokwadi:
Munyika umo vatambi vanozvikurira pahupfumi, Kevin Harvick anosarudza imwe nzira. Iye anohwina mukombe ka50 anorarama hupenyu hwakareruka uye haaratidzire mari yake.
Anofara Harvick, zvisinei, ane 1969 Chevrolet Camaro. Kevin anobvuma kuti mota hombe haisi yake. Muchidimbu, mutyairi wechipiri akapfuma weNascar anogara akazvininipisa.
Kevin Harvick Achimira Nemota yake ye1969 Chevrolet Camaro.
Mumhanyi haawani mari yake yese kubva pamujaho ari ega. Maererano neYahoo Finance, muna 2020, Kevin Harvick aive mumwe wevana vakabhadharwa NASCAR mujaho. Zvakare, nemari inowanikwa inodarika $10. 2 miriyoni yakatorwa kubva mukutsigirwa.
Muna 2021, zvisinei, nhamba dzakakwira seNo. Kevin Harvick ane mambure anokosha e4 miriyoni Madhora.
Kevin Harvick Mhuri:
Kutanga, tinoziva kuti mhuri yaKevin Harvick ndiyo nheyo yekubudirira kwevatambi. Saka, muchikamu chino, tichakurukura nhengo dzemhuri yake.
Nezve Baba vaKevin Harvick:
Mike Harvick murume ane ushingi uye kutsunga. Kutora chibayiro chekuvaka mota kubva kutanga kwaKevin Harvick kunodarika izvo mazwi anogona kutaura.
Muchidimbu, baba va'Happy Kevin' vakavimbisa kuti basa remwanakomana wavo raive rechokwadi uye rakabudirira.
Baba vaKevin Harvick vaigara vachiisa mabheti pakuita kwemwanakomana wavo mujaho. Uye shandisa mari yacho kutenga chero chaida Kevin mumotokari yake. Zvinosuruvarisa, hapana mufananidzo weiyi gem isingawanzo.
Mukufamba kwenguva, Chaizove chinhu chinofadza kuona murume ari shure kwematambudziko ekubudirira kwemwana wake.
Nezve Amai vaKevin Harvick:
Jonell Harvick akanga ari mukadzi ane mashoko mashoma aitarisira imba yemhuri. Gare gare, amai vaKevin vaifanira kushanda semunyori pachikoro chepuraimari cheko nekuda kwemari.
Rudo rwaamai kuvana vavo runovamanikidza kuvaitira zvose zvavanogona. Nekudaro, isu hatigone kunyora zvese izvo Jonell Harvick aifanira kuitira mwanakomana wake. Pasina mubvunzo mumwe chete, tine chokwadi chokuti mudzimai waMike Harvick aiva amai vakanaka.
Nezve Kevin Harvick's Siblings:
Chipo chikurusa vabereki vaKevin Harvick vakamupa yaive mukoma wake Clayton uye hanzvadzi, Amber. Ava vaviri vakaita kuti uduku hwaKevin huyeukwe.
Muchidimbu, Rinoti pasinei nokuti wakura sei, ndangariro dzinoyerera kana wava nevanin’ina vako. Amber naClayton Harvick vachadada zvikuru nekubudirira kwehama yavo. Zvisinei, isu hatina mifananidzo yavo.
Kevin Harvick Untold Chokwadi:
Tichifunga nezve zvese nezvaKevin Harvick, mumwe angafunga kuti hapana rumwe ruzivo pane iyi NASCAR icon. Zvisinei, pachine zvimwe zvisingazivikanwi pamusoro pake. Nokudaro, tichavazivisa muchikamu chino.
Harvick newag yake inoyevedza, Delana, vakagadzira KHF iyi muna 2010. Chinangwa chega chenheyo ndechekubatsira zvirongwa zvinovandudza hupenyu hwevana muAmerica. Pazasi pane logo yeKHF.
The Official Logo of the racer's Foundation.
Zvinotevera zvirongwa Kevin's Foundation inotsigira:
Athletic Scholarship Fund kuCalifornia State University
Dzimba dzevana dzeBaptist dzekuNorth Carolina
Uye iyo Camper Kabhini muVictory Junction.
Kevin Harvick Chitendero:
Maizviziva here?… Mhuri yaKevin Harvick inopinda Chechi yeFirst Baptist muKernersville, North Carolina. Vanotosvika pakupa macomputer anokosha $3000 kuvana vari muFBC.
Chechi yeFaith Baptist, Kernersville, uko iye nemhuri yake Vanopinda Mharidzo.
Chinhu chimwe chatinoziva chiKristu chinosanganisira zvinopfuura mashoko. Saizvozvowo, Kevin anoratidza muenzaniso nezviito zvinoratidza kuti muKristu anofanira kuva nemutsa kune vamwe.
Chikonzero cheNickname yake:
Kevin Harvick anonzi 'Happy Harvick' nekuda kwemaitiro ake uye zvibhakera nevamwe vake vatyairi veNASCAR. Izita rekunyomba iro rinopesana nemaitiro aaiita. Pazasi pane zvimedu zvezvimwe zvekurwa kwaKevin mujaho.
Tafura iyi inokupa iwe mukana wekutaura kuburikidza neAmerican Profile Kevin Harvick.
Zita rizere: Kevin Michael Harvick
Mazita emazita: The Closer
Zuva rekuzvarwa: 8 yaDecember, 1975
Nzvimbo yekuzvarirwa: Bakersfield, California, United States of America
Baba: Mike Harvick
Amai: Jonell Harvick
Hanzvadzi konama: Clayton Harvick
Hanzvadzi sikana: Amber Harvick
Mumwe: Delana Harvick (2001- Date)
Vana: Keelan Paul Harvick naPiper Harvick.
Net Worth: 70 Miriyoni emadhora
Kureba mu Tsoka: 5 '10'
Kureba muMeters: 1. 78m
Proffesheni: NASCAR Mujaho Mutyairi
Iyo Biography yaKevin Harvick inotisiya tichishamisika kuti kureba kwemhuri kunogona kuzvipira kune mumwe nemumwe. Kutanga kubva kuna Mike Harvick, baba vake, kuenda kuhanzvadzi yegotwe, Amber.
Mutsara wekuti mhuri inokura pamwe chete unoshanda kumhuri yaHarvick. Ivo zvirokwazvo muenzaniso mukuru kumapoka ose emhuri munzanga.
Muchidimbu, muverengi anoremekedzwa, tinotenda kuverenga kwako nemoyo murefu kweKevin Harvick's Biography. Ndokumbira utiudze muchikamu chekutaura zvaunofunga nezve iyi-nguva yese NASCAR Champion.